Which Language best choice for web developmet? — MYSTERY ZILLION
Which Language best choice for web developmet?
February 2017 edited March 2017 in Web Development
Shoud I choice the best web programming language between php(Laravel) and Ruby on Rails. I learn around 1 year for php. Now, my work is changes the current follow. They can run with Ruby on Rails. So, should I changes? Can easily learn?
PHP နဲ့ Laravel နှစ်ခုထဲက ရွေးမယ်ဆိုတာက ဘာကိုမေးတာမှန်း သိပ်နားမလည်ဘူး။ တခြားဟာ ပြောင်းလေ့လာရမလား ဆိုတာကတော့ တခုထက်ပိုတတ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်တော့ ပြောလို့ရပါတယ် သင့်လျော်ရပေါ့လေ Ruby on Rails တွေလည်း အခုနောက်ပိုင်း အသုံးများတယ် Node.js တွေလည်း အများကြီးသုံးလာတယ် သင့်လျော်ရာကိုသုံးနိုင်ရင် အလုပ်လည်းမြန်မြန်ပြီးတာပေါ့ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်တော့ တရားသေမရှိပါဘူး
Sorry, my computer has not myanmar font. I means best choice of web programming language between PHP and Ruby on Rails. My company work flow is changed from php to Ruby. So, what decided for this. First, I resign the company. Second, I learn continues the another languages. I have many worry that is my careers is changed or not.
အမ်... အဲဒါကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား လုပ်ချင်ရင်ဆက်လုပ်ပေါ့ မလုပ်ချင်လည်း တခြားအလုပ်ကို ပြောင်းပေါ့ တခုပဲအကြံပေးလို့ရတာက တသက်လုံးတော့ Language တခုထဲနဲ့ လုပ်ချင်တယ်လို့တော့ မရဘူးလို့ပဲ အကြံပေးဖို့ရှိတယ်
its good to learn another language, if i were u ,i will try ruby anyway, if not fit for u ,resign it. ^^
Ruby on Rails က PHP နဲ့ စာရင်တော့ ခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာက Ruby language နဲ့ ရေးတဲ့ company က အရမ်းနည်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်... ဘာတွေများကွာခြားမှုရှိသလဲ... သင်ပေးမယ့်ဆရာကတော့ သင်နေပြီ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ခုထိ စိတ်ထဲရွေးချယ်နေတုန်းပဲ... နှစ်မျိုးတတ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာမှန်ပေမယ့် ... ရောသွားမှာလည်း ကြောက်တယ်...
သင်တာမသင်တာက ကိုယ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ ၂ ခုသင်လို့ ရောသွားမယ်ဆိုတာကို ပြန်ဖြေပေးရရင်တော့ ကျနော် Language ဘယ်နှစ်ခုတတ်မှန်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် မှတ်မထားမိတော့ဘူး ရောမယ်ဆိုရင်လည်း အခုအချိန်ဆိုရင် အလုပ်ကိုလုပ်လို့ မရလောက်တော့ဘူး ထင်တာပဲ
ရောသွားစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်း လေ့လာတာပဲ။ အကယ်၍ ROR ကို မကြိုက်ရင်တော့ အလုပ်ထွက်ပြီး PHP နဲ့ အလုပ် အသစ်ရှာပါ။
အကယ်၍ အလုပ်မထွက်ချင်ဘူး အသစ်တွေ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ROR ကို လေ့လာဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ROR ကို သိထား တတ်ထားရင် မမှားပါဘူး။
အလုပ်ဆိုသည့် သဘောကတော့ လိုအပ်ချက် အတိုင်း လုပ်ရမှာပဲ။ ကိုယ်ပိုင် project မဟုတ်သည့် အတွက် ရွေးလို့မရဘူး။ PHP မှာလည်း Laravel ကို ကြိုက်ပေမယ့် company က cake ကို သုံးတယ်ဆိုရင် ပြောင်းပြီး လေ့လာရမှာပဲ။ ဒါက အလုပ်သဘာဝပဲ။
language တွေ framework တွေ က ရောသွားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ မေ့သွားစရာ အကြောင်းပဲ ရှိတယ်။
Thanks. ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ... အခုတော့ ROR ကို စနေပြီ... Laravel နဲ့ coding logic ပိုင်းသိပ်မကွာလို့ လွယ်ကူသွားတာ... basic အပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ Database ကြီးကတော့ အားမရဘူး sqlite သုံးနေတယ်... phpmyadmin လို ခေါ်ကြည့်ဖို့ မလွယ်ဘူး တခြား adds-on တွေသုံးနေရတယ်... အဲဒါကို သိပ်အားမရဘူး ... ဘယ်လိုသုံးရင် လွယ်ကူမလဲ .. please, help me.
ROR က mysql ကို support ပေးပါတယ်။ အခု က basic ဖြစ်နေသေးလို့ပါ။ ဒါကြောင့် မသိသေးတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သိချင်ရင်တော့ အောက်က link မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။
phpmyadmin ကို php ကို support လုပ်သည့် web server ရှိရင် သုံးနိင်ပါတယ်။
MySQL Workbench လိုမျိုး application တွေနှင့်လည်း mysql ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် localhost မဟုတ်ရင်တော့ server ကို ချိတ်ဆက်ဖို့ server မှာ phpmyadmin သွင်းထားတာ ပို အဆင်ပြေတယ်။
Thanks, Brother. phpmyadmin သွင်းထားတာ... အဲဒါက access denied ကြီး ပြနေတာ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... database password လည်း ပေးထားတယ် ...
@[email protected] setting လွဲနေတာ ဖြစ်မယ် ခင်ဗျ။ localhost နဲ့ မရရင် IP address ဖြစ်သည့် 127.0.0.1 နဲ့ ချိတ် ကြည့်ပါ။
March 2017 edited March 2017 Moderators
Edit the config.inc.php file in the phpmyadmin directory and search the following line.
Edit it with the following
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'yourPassHere';
Save, and access phpmyadmin again. Hope it will be solved your issue.
Thanks , Brother. I fix this error.
How to use ' https://www.tensorflow.org ' . What is this? Please, talk about this.
ဒီမေးခွန်းက off-topic ဖြစ်နေတယ် Question နောက်တခု ခွဲပြီးတော့မှ ပြန်မေးပါ။ ပြန်ဖြေပေးဖို့ကလည်း Machine Learning အကြောင်း ဘယ်လောက် အခြေခံရှိလဲ ဘယ်လိုလေ့လာဖူးလဲ အရင်ပြောပြမှပဲ သင့်လျော်တဲ့ အဖြေကိုပေးလို့ရမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ... Machine Learning အတွက် သုံးတာပေါ့နော်.. ကျေးဇူးပါ..